Maitiro ekufambisa "Mifananidzo" maraibhurari kubva kune imwe Mac uchienda kune imwe | Ndinobva mac
Maitiro ekufambisa "Mifananidzo" maraibhurari kubva kune imwe Mac uchienda kune imwe
Vhiki rino ndakafonerwa kubva kushamwari ichindibvunza mubvunzo chaiwo nezve iyo Mifananidzo app pane macOS. Ndaida kuziva kuti ungawana sei ese mafoto aive chikamu cheMifananidzo kubva kune imwe Mac kuenda kune imwe Uye panguva imwechete ndingaite sei kuti ndigadzire yakawanda yeaya mafoto.
Sezvaunoziva, iyo Apple Mifananidzo kunyorera paMac inoshanda kuburikidza ne raibhurari pfungwa. Nezve izvi isu tinoda kukuudza iwe kuti kuziva kutevedzera nekuchengetedza iwo maraibhurari iwe unenge watoziva mafambisiro ese e rongedza yemifananidzo iwe unayo muMifananidzo pamwe nekugadzira kopi yadzo.
Chimwe chezvinhu chandinogara ndichiraira vandinozivana navo ndechekuti havana raibhurari imwe muMifananidzo ine zviuru zvemifananidzo uye izvi ndezvekuti sezvo Maraibhurari ePikicha anokura vanova vasina kugadzikana kutova "huwori". Neichi chikonzero, izvo zvandinokurudzira ndezvokuti, semuenzaniso, une maraibhurari nemasemita kana makota egore kuitira kuti kana iwe uchida kuwana imwe muunganidzwa wemifananidzo, iwe unofanira kungoenda kuraibhurari yakakodzera uye uvhure kuti uone mifananidzo yese inogadzira mukati mayo.
Kugona kugadzira maraibhurari matsva muMifananidzo, zvese zvaunofanirwa kuita ndeizvi bata pasi iyo «alt» kiyi uchimanikidza Mapikicha app icon. Iwindo rinongoerekana raonekwa mauri kuratidzwa raibhurari iyo iwe yauri kushandisa uye pazasi peiyo hwindo une matatu mabhatani ayo anotendera iwe kuti ugadzire raibhurari nyowani, vhura raibhurari yaunayo mune imwe nzvimbo uye gare gare Sarudza raibhurari bhatani kuti mushure mekuidhinda, inovhura raibhurari yawasarudza.
Raibhurari dzatiri kugadzira dzinowanikwa nekukasira muZvifananidzo dhairekitori iyo kunyangwe iwe uchigona kunge uchionekera kuruboshwe kubarbar muKutsvaga, zvinogona kunge usina, saka kuti zvionekwe unofanira kuenda ku Finder> Zvaunofarira> Sidebar uye sarudza Mifananidzo.
Zvakanaka, kana iwe wakakwanisa kusvika kune iyo Mifananidzo dhairekitori, iwe uchaona kuti mukati iwe une Photo raibhurari iyo mushure mezvose iri mhando yemidziyo iyo inochengeta kwete chete mifananidzo mukati asi zvese zvine chekuita nezvawakashandura mavari. Kugona kusevha mapikicha ako kune imwe nzvimbo, zvese zvakawanda, zvese zvaunofanirwa kuita kuteedzera iro remudziyo faira kunzvimbo nyowani. Ive nekuchengera nekuti kana iine mafoto mazhinji mukati mayo, inorema magigabytes mazhinji uye ndosaka ndakakuudza kare kuti wajaira kugadzira maraibhurari madiki, semuenzaniso nemasemita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Maitiro ekufambisa "Mifananidzo" maraibhurari kubva kune imwe Mac uchienda kune imwe
Kana iwe watyora muvharo weMicrosoft Mouse yako 1, pano unogona kuitenga zvakare
Tipard 3D Shanduro, yemahara kwenguva shoma pane Mac App Store